Dulucda waa erayga loo adeegsado naqshadeynta websaydhka si loola jeedo tema arag muuqaal ah, taasi waa, sida ay ugu egtahay adeegsadayaasha booqda. Maalmahan waxaa aad muhiim u ah inaad yeelato degel muuqaal soo jiidasho leh ka dhigaya kuwa raacsan inay sii dheeraadaan mahadnaqa muuqaalkiisa xirfadeed. Soo ogow mowduucyada ugu fiican, kuwa ay kujiraan shaqooyin dheeri ah, mowduucyada muuqaalka ah ee dhaqsaha udhacaya ama kuwa sifiican uguquruxsan heerka SEO.
Naqshadaha Prestashop ee ugu Fiican 2021
by Encarni Arcoya samee Bilaha 9 .
Haddii aad leedahay ganacsi qadka ah ama aad abuureysid eCommerce sannadkan, waa caadi inaad u tixgeliso Prestashop sidii ...
by Encarni Arcoya samee Bilaha 10 .
Markaad bilowdo degel, waa caadi inaad adiga u dooratid nidaam, WordPress midkood (kahor ...
Mawduucyada ugu fiican ee bilaashka ah ee WordPress
WordPress wuxuu ku koray si aan u heli karno mawduucyo bilaash ah oo bilaash ah oo naga badbaadiya shaqo badan ...
Maqaalkii hore ee ku saabsan casharrada WordPress ee loogu talagalay dadka bilowga ah waxaan ku sharraxnay muhiimadda uu bartaan helay. Maanta…
by Fran Marin samee 5 sano .
Haddii aad raadineysid mawduucyo loogu talagalay Tumblr, halkan waxaad ka heli doontaa xulasho xiiso leh oo mawduucyo ah dhammaan dhadhanka kuu oggolaan doona ...
Chrome waa biraawsarka mareegaha ee heer sare maanta, waxaana badanaa sabab u ah waxqabadkiisa wanaagsan iyo ...
by Jose Angel samee 5 sano .
YouTube-ka cusubi wuxuu imanayaa sannadka 2017! Waana in barta ugu caansan ee shirkadda weyn ee Google la doortay ...
by Jorge Neira samee 5 sano .
Markaad u qaabeyneyso boggagaaga badeecooyin shaqsiyeed dalabkaaga tafaariiqda ah, waxaad u baahan tahay inaad ...
WordPress waa madal u taagan dhowr sababood oo qasab ah. Marka laga reebo inay tahay tan ugu isticmaalka badan xilligan, ...
by Araceli lauret samee 5 sano .
Jimdo waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu tartamista badan si loo sameeyo bogag internet oo bilaash ah si fudud oo aan aqoon u lahayn html ...
U turjun mawduucyada WordPress iyo plugins qaab fudud
by Fran Marin samee 6 sano .
Tarjumida mawduucyada iyo waxyaabaha la isku xiro waxay u horseedi karaan dhibaatooyin aan loo baahnayn, gaar ahaan haddii aan isku dayno inaan sameyno annagoo gacanta ku saxeyna koodhka Si kastaba ha noqotee…